Fanomanana fifidianana : Nanome 1 777 251 Dolara ny vondrona eropeanina -
AccueilRaharaham-pirenenaFanomanana fifidianana : Nanome 1 777 251 Dolara ny vondrona eropeanina
05/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Vola mitentina 1 777 251 Dolara no fandraisana anjaran’ny vondrona Eropeana anatin’ny SACEM na ny kitapom-bola iombonana ao amin’ny tetikasa ho fanohanana ny zotram-pifidianana eto Madagasikara. Omaly no notanterahina tamin’ny fomba ofisialy teny amin’ny biraon’ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny fifanaovan-tsonian’ ny masoivohon’ny Vondrona Eropeana eto Madagasikara teo Sánchez-Benedito Gaspard sy ny solontena maharitry ny Fandaharan’asan’ ny firenena mikambana, Ramatoa Violette Kakyomya ary ny solontenan’ny CENI tamin’ ny alalan’ ny filohany Hery Rakotomanana . Nanambara ny masoivohon’ ny vondrona Eropeana, atoa Antonio Sanchez-Benedito Gaspard fa ny fiaraha-miasa izay atao dia manamafy ny fanohanan’ny vondrona Eropeana ny amin’ny fandavorariana fifidianana azo antoka sy handraisan’ny rehetra anjara, manaraka ny Lalàm-panorenana. Ankilany dia ny fankasitrahana kosa no natolotry ny filohan’ ny CENI amin’izao fanampiana amin’ ny zotram-pifidianana izao.
Fa mikasika ny fanampim-bola izay mbola tadiavin’ ny CENI taorian’ny nahalany ny lalàm-pifidianana vaovao ka nampitombo ny biraom-pifidianana ho eo amin’ny dimy arivo eo ho eo, dia fantatra izao fa efa nisy ny fifanantonana maro samihafa ahafahana mameno ny banga. Vola mitentina hatrany amin’ ny 16 lavitrisa Ariary io vola izay mbola hotadiavina io, saingy kosa tsy misy atahorana izany satria ny minisitry ny Tetibola, izay efa nanazava fa hisy ny fikaroham-bahaolana ahafahana hahazoan’ ny CENI io vola fanampiny io. Noho izany taorin’izao fihetsika izay nasehon’ny vondrona eropeanina sy ny toky izay efa nomen’ny minisitry ny Vola sy ny tetibola, dia azo inoana fa tsy hipetraka ny ahiahy amin’ny lafiny ara-bola indrindra ny fanomanana ny fifidianana.
Nambaran’ ny filohan’ ny CENI Hery Rakotomanana rahateo omaly manoloana io fitadiavam-bola fanampiny io fa « efa nisy ny fivoriana izay notanterahina niaraka tamin’ ireo mpiara-miombon’antoka vahiny amin’ny fanomanana ny fifidianana ny zoma lasa teo. Amin’ny ankapobeny dia nanambara ny fahavononany amin’ ny fanohizan’izy ireo ny fanohanany ireo mpiara-miombon’antoka manoloana ny tsy fahampiana amin’ny alalan’ny SACEM »hoy hatrany ny fanazavany. Nanome toky ihany koa anefa ny filohan’ ny CENI na mbola eo aza ny fitadiavana ny vola fanampiny fa « efa niomana amin’ ny fifidianana nandritra ny roa taona ny CENI. Noho izany dia efa vonona isika amin’ny lafiny teknika indrindra efa fantatra rahateo ny datim-pifidianana. Nandritra ny fihaonana tamin’ireo mpiara- miombon’antoka rehetra izay efa nisy no nanamafisana hatrany io fahavononana io »
« Ny vava no tsy atao be », hoy ny fomba fitenenana izay. Tena mendrika ho an’ireto MAPAR ireto mihitsy izany fitenenana izany ankehitriny, satria izy ireo izao no mandrafitra ny governemanta. Praiminisitra MAPAR tokoa mantsy ankehitriny ...Tohiny